Taom-pambolena 2020-2021 : misy ny fanantenana amin’ny vary any Alaotra | NewsMada
Par Taratra sur 18/09/2020
Tsy ratsy, araka ny nahiana, ny voka-bary 2019-2020 farany teo tany Alaotra na nisy aza ny hetraketraky ny toetr’andro sy ny fahanteran’ny fotodrafitrasa. Indro kely anefa ny tsy fahampian’ny rano sy ny tsy fifehezan’ny tantsaha ny zezi-pahitra fa voatery mampiasa ny zezi-bazaha.
Tsara ny voka-bary farany teo raha ny fahitan’ny tompon’andraikitry ny rafitra mpampindram-bola (Cecam, Otiv,…) aty Alaotra. Toerana iray tena mijaly rano isan-taona koa ny any Amboavory, saingy nahafa-po ny vokatra.
Anisan’ny hanamarinana ny hatsaran’ny vokatra ny fitomboan’ny tantsaha mividy Kubota. Nilaza ny mpiasa iray amin’ny tranombarotra eto Ambatondrazaka fa “efa maherin’ny 100 ny lafonay… Roa isan’andro kosa amintsika miteny izao”. Dimy ny toerana ivarotana Kubota eto amin’ny renivohitr’Alaotra-Mangoro ka 7 tapitrisa Ar ny vidin’ny iray.
Tsy nihoatra ny 1 000 Ar ny akotry
Tsy nihoatra ny 1 000 Ar ny vidin’ny kilaon’ny akotry eny amin’ny mpamboly tamin’ity taona ity, raha ny filazan’ny tantsaha any Ambatomainty, nisy foibe Somalac fahiny ary efa nidina indray aza izany, ankehitriny. Niaka-bidy kosa ny vary fotsy, mihoatra ny 500Ar ny kapoaka (1 750 -1 800 Ar/ kg) ao Ambatondrazaka, 480Ar (1 680 Ar-1 700 Ar/kg) any Ambohitrarivo, sompitry ny vary.
Tombanana hamokatra tsara ireo tanimbary ,117 000 ha, amin’ny taom-pambolena 2020-2021. Manantena ireo sampandraharaha miara-miasa amin’ny tantsaha hatreny ifotony(CSA) fa ho tonga ara-potoana ny vola hoentina miasa.
Tsy ampy ny rano
Tsy ny vola enti-mihetsika ihany fa iankinan’ny fahombiazan’ny fambolena koa ny masomboly, ny zezika, ny teknika enti-mamboly…ary indrindra, ny rano. Mitaraina ingahy Dinah Green sy ny lehiben’ny fari-piadidian’ny Fambolena fa efa saika ilaozan’ny rano ny maro amin’ireo tohodrano. Nomarihin’izy ireo koa fa tsy mahita vokatra raha tsy mampiasa zezi-bazaha nefa manimba ny tontolo iainana.
Hotantanin’ny Italianina ny any Anosiboribory?
Marihina fa tsy vita hatramin’ny farany ny fampiofanana momba ny fanamboarana zezi-pahitra (compost), natomboka taona vitsy lasa izay. Mikasika ny masomboly, milaza ny tantsaha fa “toa Italianina indray, hono, no hitantana ny foibe any Anosiboribory…. Aoka ho marin-toerana ny fitantanana ity foibe ity, ary tokony hovokarina eto amintsika ny “hybride” fa lafo loatra”.